MUUQAAL: Xirsi Cali X. Xasan oo Weerar Culus ku Qaaday Muuse Biixi, Muxuuse ka yidhi Horumarka Muqdisho | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Xirsi Cali X. Xasan oo Weerar Culus ku Qaaday Muuse Biixi, Muxuuse ka yidhi Horumarka Muqdisho
Oct 19, 2020 - Aragtiyood
Hargeisa ( Kalshaale ) Waxaa maanta magaalada Hargeisa Warbaahinta kula hadlay Hogaamiyaha Xisbiga Wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan Wuxuuna Dhaliilo kulul usoo Jeediyey Xukuumadda uu Hogaamiyo Madaxwyane Muuse Biixi Cabdi.
Wuxuu sheegay inaysan Hirgelin Wax mashruuc ah oo la taaban karo, marka laga reebo Shaqo Qaran, oo Su’aal uu geliyey Baahidiisa. “Maba Xumo in Ciidan la tababaro, Imisa ayaynu baahanay “? Laakiin Baahi ciidan ma jirtee Duruufaha iyo Baahida in laga jawaabo ayaa u baahan, Waxay ahayd in ciidanka jooga la daryeelo, Mana Jiro Mashruuc kale oo la tilmaami karo, Wuxuuna Muuse Biixi Wakhtigii uga dhamaaday Muran iyo Garnaqsi”. Ayuu yidhi Xirsi Cali Xaaji Xasan.
Dhinaca kale Xirsi wuxuu ka hadlay Dhibaatada ka dhalatay Xayiraada la saaray Diyaaradaha Fly Dubai iyo Air Carabiya, Wuxuuna tilmaamay in Garoonka Hargeisa uu Camirnaa Markii ay timid Xukuumadda Biixi, Balse hada ay kasoo degaan oo keliya Diyaaradoo uu la xidhiidhiyey Muuse Biixi.
“Waxaad ogtihiin Duruufaha dhaqaallaha iyo Busaarada dalka ka jirta, Hadana Madaxwaynuhu wuxuu bilaabay inuu joojiyo Qaar kamid ah Shirkadihii, Sida kuwii shidaalka keeni jiray, iyadoo la keenay Shirkad Sumcad Xun dunida ku leh, oo meelo badan Sun ku aasay, islamarkaana lagu dacweeyay”.
“Waxaa la yaab badan in Ganacsatadeenii la curyaamiyo oo la keeno Shirkado kale, Hadana miyaad aragteen Wax isbadal ah iyo Shidaalkii oo Jabay , Waad Arkayseen Shirkadihii Diyaaradaha sida Fly Dubai iyo Air Carabiya in la Xayiray, Waxayna arintaasi u muuqataa in Muuse Biixi indhaha iska ridayo, Wuxuuna Garoonkii u daayey Hal diyaarad oo loo tiiranayo” Ayuu yidhi Xirsi Cali Xaaji Xasan.
Dhinaca kale wuxuu tusaalle usoo qaatay magaalada Muqdisho iyo Horumarka ka socda, Wuxuuna tilmaamay in Garoonka Muqdisho ka degaan Diyaarado aad u tiro badan. “Muuse biixi waxaan leenahay war dadku Gaajo kuma raacayaan, Kuwii ku doortay sida Nebi kuma ay Rumayn” Ayuu yidhi Xirsi.
Ugu dambayntii wuxuu siwayn u dhaliilay Siyaasadda Muuse Biixi ee Safarka Gobolada, wuxuuna tilmaamay inuu kala qabinayo Bulshada gobolada Togdheer iyo Awdal, isagoo isticmaalaya Qaybi oo xukun.